Xog: Wasiirkee ayey beesha Habargidir ka heli doontaa golaha wasirada cusub? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Wasiirkee ayey beesha Habargidir ka heli doontaa golaha wasirada cusub?
Xog: Wasiirkee ayey beesha Habargidir ka heli doontaa golaha wasirada cusub?
Haddaba Caasimada Online oo ah shabakad aad uga barateyn inay idiin soo gudbiso xogaha qarsoon ee siyaasadda Soomaaliya ayaa si hoose usoo ogaatay wasiirka ay Beesha Habargidir ka heli doonto golaha wasiirada cusub.
Beesha Habargidir oo ah beel weyn oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed sidoo kalana dhawaan dagaal siyaasadeed culus u gashay sidii ay u heli laheyd xilka Ra’isulwasaarahanimo iyagoo kulamo kala duwan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo markii dambe madaxweynaha uu go’aanka ku qaatay inuu ka dhigo shaqsi kasoo jeedo beesha Murusade.
Haddaba odayaasha iyo siyaasiyiinta Habargidir ayaa si weyn ugu qancay go’aanka uu qaatay madaxweynaha iyo cidda uu ka dhigay Ra’isulwasaaraha waxayna ka war sugayaan wasiirka laga siin doono golaha wasiirada cusub ee la filayo in lagu dhawaaqo maalinta Arbcada ee soo socoto ama Arbacada xigto.
Haddaba Caasimada Online ayaa soo ogaatay in Beesha Habargidir ay heli doonto wasiirka Amniga Qaranka oo ah xil aad u muhiim ah wadatashiyo badan kadibna sidaas ayaa lasoo sheegayaa inuu Ra’isulwasaaraha go’aan ugu qaatay inuu xilkaas siiyo.